मिडियामा लाग्न घरमा संघर्ष नै गर्नुपर्‍यो - अनुभब - नारी
सुरक्षा पन्त, नायिका तथा भिजे
धनपति चलचित्रको वर्कसपमा व्यस्त छु ।
टेलिभिजनबाट बिदा लिनुभएको हो ?
कस्ता कार्यक्रम लिएर काँचको पर्दामा आउने रहर छ ?
सुरुमा अनुभवका लागि मनोरञ्जक कार्यक्रम संचालन गरियो तर उमेर वृद्धिसँगै विकसित परिपक्वताले बौद्धिक कार्यक्रमतर्फ रुचि बढेको छ ।
त्यसो भए अब सुरक्षाले बौद्धिक कार्यक्रम लिएर टेलिभिजनमा आउँदा अचम्म मान्नुपरेन ?
पक्कै पनि, अब म छुट्टै पृष्ठभूमिको सामाजिक कार्यक्रम लिएर आउँदैछु ।
आफूले पढेको इन्जिनियर क्षेत्रमा काम नगर्ने ?
सुरुमा दुई वर्ष त साइट सुपरभाइज गरें अब चाहिँ स्नातकोत्तर गर्ने योजना छ । अहिले उमेर र जोस हुन्जेल आफूमा भएको प्रतिभा र रुचिको क्षेत्रमा योगदान दिने हो तर पछि त इन्जिनियरिङमै लाग्नेछु ।
हरेक समय नयाँ काम गर्न चाहने तथा कुनै एउटा काममा केन्द्रित भएर बस्न नसक्ने व्यक्ति ।
पढाइभन्दा भिन्न क्षेत्रमा लाग्दा घरबाट कुनै रोकटोक भएन ?
पहिले त धेरै नै गाली खानुपथ्र्यो । मिडियामा लाग्न घरमा संघर्ष नै गर्नुपर्‍यो । अहिले पनि घरमा इन्जिनियरिङमा मात्र लागे हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ ।
चलचित्र क्षेत्रमा क–कसबाट प्रभावित हुनुहुन्छ ?
साइनो, सम्झना, अल्लारे आदि चलचित्रले मलाई प्रभाव पारे । म सानैदेखि नृत्य, कला, गीत एवं अभिनयमा सक्रिय थिएँ । अहिलेका दयाहाङ राई, सौगात मल्लदेखि लिएर थुप्रै नयाँ कलाकारबाट प्रभावित छु । अहिले आएका कलाकारमा नेचुरल अर्गानिक तथा वेस्टर्न स्वाद दुवै भएकाले बढी प्रभावित छु ।
चलचित्र क्षेत्रको अनुभव कस्तो रह्यो ?
कलाकारिता खुल्ला क्षेत्र हो । क्षमता छ भने यहाँ राम्रोसँग लाग्न र टिक्न सकिन्छ ।
चैत्र ७, २०७३ - घरमा अफिस बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा